Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Xarunta Daaweynta Kansarka ee California Proton
NABADGELYADA KU SAABSAN HADA
Xarunta Caafimaadka Kansarka Kansarka ee loo yaqaan 'Protons Cancer Therapy Center' (California Protons) ayaa horumarisay oo fulisay siyaasadahaan si ay u muujiso sida ay uga go'an tahay asturnaanta. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso fahamka sida aan u ururinno, u isticmaalno, u wadaagi lahayn, oo aan u ilaalin lahayn macluumaadka aan ururinno oo aan kugu caawin karno go'aannada xog-ogaalnimada ah marka la adeegsanaayo adeegyada bartayada internetka ("Site").
Adigoo isticmaalaya Bogga, waxaad oggolaatay uruurinta iyo adeegsiga macluumaadka sida lagu sharxay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Haddii aadan ku raacsaneyn dhammaan shuruudaha Siyaasadda Asturnaanta, waa inaadan adeegsan adeegyadeena ama Bogga.
MACLUUMAADKA AAN XAJIRO
Waxaan si otomaatig ah u uruurineynaa una kaydineynaa cinwaanka IP-ga iyo magacyada domain ee booqdayaasha oo dhan. Waxaan sidoo kale la soconaa boggaga aad ku aragtid gudaha Bogga, taariikhda iyo waqtiga aad ku aragtid bogaggaas, faahfaahinta sida aad u isticmaaleyso Bogga, sida weydiimahaaga raadinta, iyo Cinwaanka IP-ga ee websaydhka aad u adeegsatay inaad toos ugu xirirto barteena Goob. Macluumaadka noocan oo kale ah waxaa lagu isku daraa xogta raadraaca ee booqdayaasha kale ee Bogga. Waxaan u istcimaalnaa macluumaadkan isku-darka ah inay naga caawiso qiimeynta qaababka taraafikada soo booqdayaasha oo aan hagaajino Goobta anagoo ka dhigneyna inay wax ka qabato baahiyaha booqdayaasha.
MACLUUMAADKA AQOONSIGA EE QOFKA
Waxaan ururinaa oo kaydineynaa macluumaadka shaqsi lagu garan karo sida magacaaga, cinwaankaaga, lambarka taleefankaaga, iyo cinwaanka e-maylka markii naloogu deeqo Bogga. Adigoo galaya macluumaadka mid ka mid ah meelahan, waxaad na siisay ogolaansho aan kula soo xiriirno oo ku saabsan waxyaabaha la soo xulay, shirkadaha, iyo dhacdooyinka aan u maleynayno inay adiga ku xiiseyn karaan.
Goobteenu waxay adeegsataa cookies ama teknolojiyad la mid ah oo ay ku aruuriso ama ku kaydiso macluumaadka marka aad soo booqato barteenayada ama la macaamilayso adeegyada aan bixinno. Waxaan ururin karnaa oo aan ku keydin karnaa cookies, kuwaas oo ah faylal xog yar, gudaha ah aaladdaada. Waxaan u isticmaalnaa buskud ama teknolojiyad la mid ah si aan booqashadayada uga dhigno mid fudud. Kukiyada ayaa noo oggolaaneysa inaan keydino doorbidyada aad na siiso. Kukiyada ayaa naga caawisa aruurinta xogta qadka sirta ah ee raadraaca isbeddelada isticmaalaha iyo qaababka. Baarayaasha badankood waxay kuu oggolaadaan inaad wax ka beddesho nidaamkaaga si aad u xaddiddo cookies-ka gabi ahaanba, kuu soo sheegaan mar kasta oo loo diro, ama u oggolaadaan isticmaalkooda keliya bogagga internetka ee aad doorato. Sidoo kale waad tirtirikartaa cookieska hada lagu keydiyo qalabkaaga. Waa inaad fahanto in meelaha qaarkood ama howlahooda ku yaal Bogga aysan sifiican u shaqeyn karin haddii aad dejiso biraawsarkaaga inaan la aqbalin cookies.
SIDEE AYAAN U ISTICMAALaa MACLUUMAADKA AAN Uruurinayo
Waxaan u istcimaalnaa macluumaad iskucelcelis ah si ay nooga caawiso qiimeynta qaababka taraafikada soo booqdayaasha oo aan u hagaajino barteenna annaga oo ka dhigneyna mid wax ka qabta baahiyaha booqdeyaasha Macluumaadka shaqsiga lagu garan karo ee aan soo aruurino waxaa loo isticmaalaa in lagu habeeyo codsiyada laga sameeyo Degdeena, u suurtagelinta marin u helka adeegyadayada ama macluumaadka, bixinta, joogtaynta, ilaalinta, horumarinta iyo hagaajinta adeegyadeena ama macluumaadka, oo aan kula soo xiriirno. Waxaan sidoo kale u adeegsanaa macluumaad shaqsi lagu aqoonsan karo oo aan aruurinno si aan kula soo xiriirno wixii ku saabsan badeecadaheena iyo adeegyadeena laga yaabo inay adiga xiiseeyaan.
SIDEE AYAAN U SHAQEEYA MACLUUMAADKA AAN QAADANO
Kama iibin doonno, ma kireysan doonno, kuma qeybsaneynno, ama haddii kale shaaca ka qaadi doonno macluumaadka shaqsi ahaan lagu garan karo ee aad adigu dhiibto ama aan ku helno iyada oo loo adeegsanayo barta internetka qayb saddexaad ee loogu talagalay in loogu oggolaado inay ku suuq geyso waxsoosaarkooda ama adeegyadooda adiga. Waxaan u siidayn karnaa macluumaadkaaga shirkadaha ina siiya adeegyo taageero ah sida daabacadaha ama guryaha boostada ee naga caawiya suuqgeynta badeecadaheena ama adeegyadeena, ama martigaliyayaasha shabakadda ama naqshadeeyayaasha naga caawiya abuurista iyo dayactirka goobta. Waxaan u siidayn karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed ee lagu garan karo qof kasta oo ka mid ah hay'adaha ku xiran iyo kuwa u matalaya wakiilladayada si aan kuu siino adeegyadeenna. Waxaan kaloo shaaca ka qaadi karnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed: (a) iyadoo laga jawaabayo codsiyada saraakiisha degmada ee fulinta sharciga; (b) iyada oo laga jawaabayo maxkamad, maamul, ama dacwad la mid ah sida amar maxkamadeed; (c) marka sharcigu farayo; ama (d) duruufaha gaarka ah sida ka jawaabista hanjabaad jireed ama hanjabaad jireed oo loo arko shakhsi kasta ama in lagu xoojiyo Shuruudaha Isticmaalka Bartan.
Mar mar, howlgaladeena iyo dhaqamadayada ganacsiga ayaa dib loo fiiriyaa si loo waafajiyo siyaasadaha iyo habraacyada xukuma amniga, qarsoodinimada, iyo tayada macluumaadkayaga. Qiimaheena shirkadeed, heerarka anshaxa, siyaasadaha, iyo waxqabadka waxaa ka go'an ilaalinta macluumaadka macaamiisha. Guud ahaan, howlaheena ganacsi waxay xaddidayaan helitaanka macluumaadka qarsoodiga ah waxayna xadeeyaan isticmaalka iyo siidaynta macluumaadka noocaas ah dadka loo oggolaaday, howlaha, iyo macaamil ganacsi. Waxaa laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno macluumaadka markii si sharci ahaan loogu qasbay in sidaas la sameeyo, marka si kale loo dhigo, marka annagoo ah, niyad wanaagsan aan aaminsanahay in sharcigu u baahan yahay ama ilaalinta xuquuqdeena sharciyeed.
Shuruudaha Adeegsiga California Protons, maadaama laga yaabo inay waqti ka waqti bedesho, ayaa halkan lagu soo daray sida qayb ka mid ah Nidaamkan Asturnaanta.
Bartaan waxaa ku jira xiriiriyeyaal shabakado kale. Annagu mas'uul kama nihin waxa ku jira bogaggaas kale, hab-dhaqannada asturnaanta ee shabakadaha kale, ama sida ay ula dhaqmaan macluumaadka ku saabsan isticmaaleyaasheeda. Waxaan kugula talineynaa in booqdayaashu ay akhriyaan siyaasadaha gaarka ah ee shabakadaha kale ee ay booqdaan si ay u go'aamiyaan dhaqamada macluumaadka shirkadaha iyo ururada kale. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu khuseeyaa oo keliya California Protons iyo isticmaalkaaga Bogga.
Waxaad ogolaatay inaad difaacdo, sheegto, oo aad haysato California Protons, kuxigeenadeeda, saraakiisha, agaasimayaasha, shaqaalaha, wakiillada, shatilayaasha, iyo alaab-qeybiyeyaasha aan dhib lahayn kana soo horjeedo sheegashada kasta, ficilada, dalbashada, magdhawga, qaan-sheegashada, iyo dejinta oo ay ku jiraan, iyadoon xadidneyn, macquul ah ajuurada sharciga iyo xisaabaadka ee ka dhasha ama lagu eedeeyo inay ka dhaceyso xadgudubkaaga shuruudaha adeegsiga ama Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Waxaan xaq u leenahay inaan badalno, wax ka beddelno ama aan cusboonaysiinno Nidaamkan Asturnaanta wakhti kasta. Wixii isbeddello ah, wax-ka-beddelid ama cusboonaysiin ah ee Nidaamkan Qarsoodiga ah si dhakhso leh ayey u dhaqan galaan isla markii ay ku dhejistaan ​​Bartaan. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad dib u eegto Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah si aad ula socotid wixii isbeddelo ah, isbedelo ama cusbooneysiin ah. Isticmaalkaaga sii wadida ee Goobta macnaheedu waa inaad aqbashay oo aad oggolaatay in lagu xakameeyo isbeddeladaas, wax-ka-beddelka iyo cusboonaysiinta. Si loogu haboonaado iyo tixraacaaga mustaqbalka, taariikhda nooca loo yaqaan Nidaamkan Asturnaanta ayaa hoos ku yaal. Waxaan ku hayn doonnaa noocyadii hore ee Nidaamkan Qarsoodiga ah meel galka loogu jiro dib u fiirintaada.
Waxaan xasaasi u nahay baahida loo qabo inaan ilaalino asturnaanta carruurta isticmaaleysa internetka. Bogga looguma talagalin ama looma habeynin carruurta kayar da'da 13 Si ula kac ah ugama uruurinno macluumaadka shaqsi ahaan lagu garan karo carruurta kayar da'da 13 sano iyadoo la raacayo Sharciga Ilaalinta Khaaska ah ee internetka. Haddii aan ogaanno in ilmo ka yar da'da 13 uu bixiyay macluumaad shaqsi lagu aqoonsan karo anaga oo adeegsanaya Xarunteena, waxaan ka tirtiri doonnaa faylalkayaga. Haddii aad tahay waalid ama mas'uul sharciyeed ah qof ka yar da'da 13 oo aad aamminsan tahay inuu u soo gudbiyey macluumaad shaqsiyeed, fadlan nala soo xiriir annaguna waxaan qaadi doonnaa tallaabooyin ku habboon si aannu uga tirtirno macluumaadka noocan ah faylalkayaga.
Gabi ahaanba ma xaqiijin karno asturnaanta isgaarsiinta emayl ee loo diro ama uga imaada California Protons. Ma siin karno mana bixin karno wax dammaanad qaad ah oo ah in waxa ku jira iimaylkaaga aan loo aqoonsan doonin ama marin u yeelan doonin qolo saddexaad. Isgaarsiintaan waa la xiri karaa adiga oo aan aqoontaada iyo ogolaanshahaaga ahayn inta lagu sii socdo ama laga tagayo Goobtayada. Waxaan kugula talineynaa inaadan adeegsan e-maylka si aad noo siiso macluumaad aad tixgelinayso macluumaad sir ah ama xasaasi ah.
Adigoo isticmaalaya Bogga waxaad ogolaatay inaannaan mas'uul ka aheyn (i) muujinta macluumaadkaaga shakhsiyeed ee aad u sameysay dhinac saddexaad adoo adeegsanaya Bogga; (ii) wixii kashifaad ah oo ku saabsan macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee sharci darro laga helo annaga annaga; ama (iii) siidaynta wixii shil ah ee macluumaadkaaga shaqsiyeed ee aannu sameynay.
Booqdeyaasha ku booqda barteena ayaa la siin karaa fursad ay ku doortaan haddii macluumaadkooda loo adeegsado ujeeddooyin gaar ah halka aan ku weydiisaneyno macluumaadka. Soo-booqdeyaasha aan dooneynin inay helaan xayeysiintayada ama macluumaadka ku saabsan fursadaha aan bixinno waxay dooran karaan inaysan helin ogeysiisyadan iyagoo nagala soo xiriiraya info@californiaprotons.com.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, faallooyin ama walaacyo ku saabsan Nidaamka Asturnaanta, fadlan nagala soo xiriir at info@californiaprotons.com.